Umhleli wezilimi - University of Johannesburg
Home » Faculties of Humanities » School of Languages » Languages, Cultural Studies and Applied Linguistics (LanCSAL) » Department of Linguistics » Linguistics » IsiZulu » Ukukhethwa kwemisebenzi » Umhleli wezilimi
Umhleli wezilimi wenza yonke imizamo ephusile ehlose ukuguqula indlela yesifundo sezilimi senkulumo yomphakathi. Izinhlobo zokuhlela izilimi zifaka, phezu kokunye: ukuhlela isimo okufaka yonke imizamo yokuguqula ukusetshenziswa kolimi emphakathini othize; ukuhlela isithunzi okumayelana nokwakha ingemuva lokuphathelene nengqondo okufanele ukweseka inqubomgomo nokuhlelwa kwezilimi; ukuhlela ikhophasi okufaka yonke imisebenzi yokuguqula isakhiwo sangaphakathi noma umzimba wolimi ngokubhala izincwadi zohlelo nolimi, izichazamazwi, njll. (Kufaneliselwa ukusuka ku-Mestrie 2009).
Amaphrofayili wabahleli bezilimi